Drostanolone (Masteron Enanthate) ntụ ntụ (472-61-1) ≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Usoro Drostanolone / Masteron Enanthate (Drostanolone) ntụ ntụ
SKU: 472-61-1. Categories: Usoro Drostanolone, Anabolics Steroids
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Drostanolone (Masteron Enanthate) ntụ (472-61-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Masteron Enanthate (Drostanolone) ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Drostanolone (Masteron Enanthate) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C27H44O3
Ọbara arọ: 416.64
Drostanolone (Masteron Enanthate) ntụ ntụ eji mee ihe na steroid steroid
A na-akpọ Drostanolone Enanthate (CAS 472-61-1) dị ka Masteron E, Mastabol, Mast E, Masto E, Ụgha E, ME, DE, wdg.
Fluidanolone ntụ ntụ Usage
A na-ahụkarị 100 mg / mL. Usoro ọgwụgwọ a ga-ekwu bụ 500-700 mg / izu.
Ịdọ aka ná ntị na Masteron Enanthate ntụ ntụ
Masteron na-eme nke ọma ihe ọ kwesiri ime, ma nwee mmetụta dị nfe dịka ọ ga-ekwe omume maka steroid anabolic. Ọ dịtụbeghị mgbe m mara onye ọ bụla na onye steroid a na-emechu ya ihu, ma ọ bụrụ na e jiri ya mee ihe zuru ezu
Masteron nwekwara uru na testosterone maka usoro ọgwụgwọ nke ọgwụ mgbochi hormone (HRT). Dịka ọmụmaatụ, 100 mg / izu ọ bụla nke Masteron na testosterone nwere ike ịba uru maka uru nke anụ ahụ na 200 mg / izu testosterone naanị, ka ị na - mmetụta dị na ya n'ihi ụda nke estradiol (estrogen) na DHT.
Fluidanolone ntụ ntụ (CAS 472-61-1)
Drostanolone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Masteron Enanthate ntụ ntụ (CAS 472-61-1); zụrụ Drostanolone ntụ ntụ si AASraw
AAS raw na-enye ọcha 98% Drostanolone / Masteron Enanthate raw ntụ ntụ ka n'okpuruala labs maka nnukwu uru ojiji.
Masteron Enanthate ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
1 nyochaa maka Masteron Enanthate (Drostanolone) ntụ ntụ
Masteron Enanthate (Drostanolone) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma